XEERARKA UGU MUHIIMSAN EE BEERITAANKA TULOOYINKA DAYRTA DHULKA - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Tillaabinta dayrta dayrta
Tulips waa mid ka mid ah ubaxyada ugu caansan ee beerta. Waxaa laga heli karaa dhammaan sariiraha iyo beeraha. Tulip waxaa lagu kala soocaa quruxdiisa iyo daryeelka aan qabin. Waxaa haboon in la xuso in tulips laga beerto dhulkii xilliga dayrta waa mid dhib badan. Si aad tulip guga ku faraxsan tahay quruxdiisa, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida si habboon u beeri.
Ma taqaanaa? Waxaa jira 15 fasal oo tulips oo adduunka ah, waxaana jira boqolaal nooc. Midabkeedu wuxuu ka duwan yahay midabka cas ilaa cagaarka madow.
Taariikhaha dayrta beerashada dayrta
Shuruudaha tulooyinka beerto ee dayrta waxay ku xiran tahay heerkulka ciidda. Waxaa ugu wanaagsan in ubax laga soo bilaabo dhammaadka Sebtembar ilaa horraantii Bishii 11aad. Waxa ugu muhiimsan waa in cimiladu weli ahayd mid diiran. Iyada oo bilawga qabow daran, gaar ahaan baraf, tani lama sameyn karo.
Wixii beeritaanka wax soo saar ee tulips ee dayrta ee dhulka, waxaa muhiim ah in aan si dhakhso ah u sameeyaan, haddii kale nalalka xidid iyo sprout. Markaas dhaxan ayaa dhaawici doona. Si aan u lumino socodka xilliga soo degidda, samee qiyaastii xilliyada heerkulka carrada. At qoto dheer ee tulips beerto (15 cm), waa inay ahaataa + 10 ° C.
Waa muhiim! Waqtiga saxda ah ee soo degitaanka way adagtahay in la waco cimilada, taas oo isbeddesho sannad kasta. Xooga saarka heerkulka ciidda iyo shuruudaha laleh soo baxa - 3-4 toddobaad.
Sida loo doorto nalalka tayo sare leh ee beerto
Beeridda habboon ee tulooyinka dayrta waxay sidoo kale ku xiran tahay doorashada ee wax beerto. Waxay door bidaan nalalka waaweyn iyo mid caafimaad qaba. Burburay ama bukaanku wuxuu ku faafi karaa caafimaad marka la beeray, ka dibna waa lagaa tagi karaa adiga oo aan tulips.
Ka hor inta ubax lagu beeray dhulka, naqshad nalalka leh daawada antifungal ama antibakteral gaar ah.
Daroogooyinka leh saameyn la mid ah qadar weyn oo ah dukaanka khaaska ah. Ka hortagga ayaa kaa caawin doonta in laga takhaluso cayayaanka nalalka lafaha, cudurada iyo fayraska.
Xulashada goobta, diyaarinta ciidda iyo bacriminta ka hor intaan la beeri
Geedaha loo yaqaan 'tulips' xilliga Dayrta waxay ugu fiican tahay aagga iftiin leh. Dusha sare waa inuu ahaadaa mid si aan biyuhu u joogin. Haddii kale waxay u horseedi kartaa in lakabiyo oo lagu keydiyo nalalka. Haddii aad ku beerto tulooyinka ee hooska, ka dibna ma heli doonaan qorrax ku filan, iyo afkoda waxay noqon doonaan dhuuban, iyo ubax yar yihiin.
Bannaanka ayaa inta badan weydii su'aasha: nooca dhulku tulips jacaylku? Waxaa jira jawaab lagu caddeeyey dhaqanka - waa ciid ah oo leh falcelis dhexdhexaad ah ama daciif ah. Tulips waxay jecel yihiin iftiin, dhul qani ku ah qosol. Haddii aad ku beeri kartid deegaan asiidh ah, burooyinkeeda waa la jabinayaa.
Xilliga dayrta waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo humus iyo Bacriminta meesha meesha tulips laga beerto.
Ma taqaanaa? Waxaa ugu fiican in la beero tulips ee meesha ay jiraan dalagyada bocorka, calendula, strawberries ama digirta. Ha ku beeriin meel ay ku kobcaan dalagyada ama dalagyada dalagga.
Diyaarinta hore ee nalalka
Diyaarinta tulips ee beeritaanka dayrta waa sida soo socota:
si taxadar leh u baaro nalalka dhaawaca iyo jirrada;
kala sooc waxyaabo beerta;
waxay ubaahan tahay in la hirgeliyo nalalka leh dhaawac yar.
Marka loo diyaarinayo beerto, hubso inaad ka soo saarto buunshaha nalalka. Under waxay noqon kartaa cayayaanka ama calaamadaha cudurka, tusaale ahaan, kalluunka gogol. Intaa waxaa dheer, iyada oo aan khariidad, tulips si fiican u nuugo macdanta ka soo ciidda.
Si loo ilaaliyo nalalka ka soo cayayaanka iyo cudurrada, waa inaad ogaataa sida loola tacaalo tulooyinka kahor intaadan beeran. Si arrintan loo sameeyo, nalalka aad kala soocday, qabow 30 daqiiqo xal daciif ah oo ah kaneecada si looga ilaaliyo cudurada fangas.
Sida loo dhejiyo nalalka tulip ee dhulka
Beeridda habboon ee tulips dayrta waa sida soo socota:
bacrimiya carrada leh compost;
Nalalka lagu beeray qoto dheer oo ah 15 cm;
masaafada u dhexeysa nalalka waa 10cm;
Nalalka waaweyn ee lagu dhex beeray xarun, yaryar - cidhifyada. Sidaas darteed ubax weyn ma iftiin doonaan iftiinka kuwa yar yar;
noocyo kala duwan waxay u baahan yihiin in si gooni ah loo beeray;
Ha ilaawin ilaalinta ka hortaga jiirka.
Haddii aad si fiican u dhejisid tulafyada, ilaalinta shuruudaha iyo tiknoolajiyada, ka dibna guga way ku farxi doonaan quruxdooda. Ha ilaawin bacriminta beeraha lagu beeray guga.
Mulching ciid: faa iido iyo iid
Mulching - waxay ku dabooshaa ciidda ku wareegsan dhirta oo leh qalab lagu maamulo biyaha iyo hawada. Bannaanka ayaa isticmaala caleemaha carrada si loo xakameeyo haramaha.
Farsamadan beerta waxay ka caawisaa in ay dhirta ka ilaaliso in ay qalajiso, laga bilaabo caws iyo cayayaanka. Faa'iidada ayaa ah qalabkaoo loo isticmaalo mulching, dabiiciga ah: cawska, cawska ama caws, jilif, jajabyo, sida balka, dhoobada, dhagaxyada ama quraaradaha.
Waxay u tarjumayaan ciidda leh macdanta waxtarka leh iyo bacriminta, hagaajinta dheecaanka iyo qaabka carrada, waxay bixiyaan isbeddelka biyaha iyo oksijiinta.
Hooska ayaa ah in isticmaalka cawsku uu soo jiidan karo jiirka ama cayayaanka kale ee nalalka lalabada, cawsku wuxuu u kala qaybin karaa xajmiga qashinka iyo gubi dhirta, jilifaha iyo qoryaha qoryaha - oo aan ku habboonayn tulliyada yar yar.
Haddii aad wali go'aansato inaad mulcho ciidda, go'aamiso dhirta ku habboon nooca wax aad dooratay. Wixii tulips Peat ama cows la jarjaray ayaa ugu fiican. Lakabka mulch waa in aan ka badnayn 5 cm.
Ka ilaalinta jiirka
Si loo ilaaliyo tulooyinka laga soocayo jiirka, isticmaal weel gaar ah oo aad sameysay ama iibsato dukaamada. Tusaale ahaan, dhoobada dhoobada, dhalooyinka caaga ah, shabakadaha. Laakiin habkani ma aha mid si gaar ah ufilmaamaya, sida mashiinka caqli ahaantu u fuuli karaan dhalada ama dheriga.
Waxaa fiican in dhirta laliyo daadadku waxay u egtahay isdhaaf. Wareegtadiisu waxay ka dhigtaa jiirka iyo jiirka kale.
Waa muhiim! Bannaanka u badan, si loo ilaaliyo nalalka ka soo jilciya, si fudud dhirta tulubada u dhow qabow marka jiirarka u tagaan si ay u hibernate.
Dukaammadu way ka cabsanayaan basbaaska gaduudka, taas oo lagu baari karo basasha ka hor inta aan la beeri. Beerta qaar ka mid ah dagaalka ka dhanka ah jiirka ayaa caawinaya Vishnevsky cadar ama kerosene, kaas oo lagu daaweeyo nalalka.
Ubaxyo qurux badan ayaa ku farxi doona dhammaan guga, haddii dayrta aad dhali tulips sida aan ku talinaynaa qodobkan.